Old Roll Apk Download Ho an'ny Android [Fakan-tsary] - Luso Gamer
Ny taona 80 dia noheverina ho vanim-potoanan'ny revolisiona ara-teknolojia. Aiza no tena voa mafy ny vahoaka noho ny teknolojia farany amin'ny endrika fakan-tsary analogue. Amin'izao fotoana izao, ny olona dia afaka miditra amin'ny fakantsary nomerika farany. Na izany aza dia mahafinaritra anao foana ny miaina ireo fotoana taloha ireo ary mametraka Old Roll Apk.
Raha ny tena izy, ity fampiharana ity dia novolavolaina mifantoka amin'ny mpampiasa android. Indrindra ireo mpampiasa izay mankafy ny fiainana sy mankafy ny vanim-potoana 80 taloha. Aiza no tian'ny olona mampiasa ireny teknolojia efa lany daty ireny mba haka sary samihafa.
Ny fitazonana fakan-tsary dia midika zavatra betsaka amin'io fotoana io. Satria ny fialam-boly dia heverina ho lafo sy tsy lafo. Amin'izao fotoana izao, efa lany tamingana io teknolojia io ary mitady hatrany ny tanora. Mba hahitana loharano sy hampifantoka ny fanirian'ny olona eto dia manolotra Old Roll App izahay.
Inona ny Old Roll Apk
Old Roll Apk dia heverina ho fikarohana tsy mampino ho an'ny taranaka maoderina. Aiza no ahafahan'ny tanora miaina sy mankafy ny fampiasana fakantsary teknolojia tranainy maimaim-poana. Na dia heverina ho tsy azo atao aza ny mahita sy miaina ireo fakantsary analogue ireo.
Na izany aza, ny milina mahazatra tranainy sasany dia azo alaina amin'ny tranombakoka. Tsy azo atao anefa ny mahita ireo milina tranainy rehetra ireo. Na izany aza, mifantoka amin'ny taranaka tanora sy ny traikefa 80 taona. Tafita amin'ny fandrafetana ity fampiharana vaovao ity ny mpamorona.
Maimaimpoana izany ary tsy mitaky famandrihana na fisoratana anarana. Ankoatr'izay, ny mpamorona dia mametraka ireo fakantsary samihafa ao anatiny. Ny fisafidianana ireo milina ireo fotsiny dia hampiseho dashboard misy interface tsara miaraka amin'ny toetran'ny sary.
Tsindrio fotsiny bokotra iray ary misafidy ny manokana Camera App dia hanolotra traikefa mitovy amin'ny smartphone. Maimaimpoana tsy misy fisoratana anarana amin'ny alalana. Raha vonona ny hijery ireo milina tranainy ireo ianao dia apetraho ny Old Roll Download.
anarana Roll taloha
Anaran'ny fonosana com.accordion.analogcam
SOKAJY Apps - Photography
Rehefa mametraka sy mandinika lalina ny fampiharana isika. Hitanay fa manankarena amin'ny endri-javatra sy ny fahafahana. Ny ankamaroan'ny newbies vaovao amin'ny fampiharana. Mino fa ity fampiharana manokana ity dia novolavolaina mifantoka amin'ny Photo and Video Editing.
Saingy raha ny tena izy, ity rakitra app ity dia tsy manohana ny serivisy toy izany. Ny hany fanohanan'ity rakitra app ity dia manome sehatra iray. Aiza no ahafahan'ny mpampiasa kisendrasendra mankafy maka sary amin'ny milina tranainy. Na dia heverina ho tranainy sy lany andro aza ireo milina ireo.
Na izany aza, mino ny manam-pahaizana fa tonga lafatra ireo amin'ny fakana ireo fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny zoro mavitrika. Ny fakan-tsary azo tratrarina haka sary dia ahitana mavokely, Santa, Lunar, Mini, Vario, Amour, NK-F, Diana, 120 V, Pumpkin, 612 II, Half, XF 10 ary Xpan sns.
Ny malaza indrindra dia ny Classic M, INS P, CCD, Post Office, Indie, G7X, F3 ary Rol 3.5. Ny milina Super 8 dia malaza amin'ny fakana horonan-tsary avo lenta amin'ny zoro samihafa. Misy safidy collage amin'ny antsipiriany azo alaina ihany koa.
Alao fotsiny ny sary ilaina amin'ny loko sy zoro mifantoka. Aorian'izay dia ampifandraiso mora foana ireo mampiasa safidy collage ary asehoy afisy tokana manankarena fahatsiarovana. Noho izany dia vonona ny hankafy sy hiaina ireo fotoana taloha ianao dia misintona Old Roll Android.
Mora ampiasaina sy ampiasaina.
Be dia be ny fakantsary interface tsara aseho.
Ireo dia mora azo avy ao anatiny.
Voarara ny doka an'ny antoko fahatelo.
Ny milina modely klasika dia azo tratrarina ihany koa.
Safidy galeria amin'ny antsipiriany dia azo tratrarina.
Aiza no azo tratrarina daholo ny horonan-tsary sy sary nalaina.
Na ireo sary nalaina ireo aza dia azo avadika ho tena endrika collage.
Tsotra ny interface tsara amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fametrahana Old Roll Apk
Rehefa nandinika ny tsena izahay dia nahita ny kinova farany amin'ny fampiharana azo idirana amin'ny Play Store. Na izany aza, smartphones maro no mety hiteraka olana lehibe amin'ny fitadiavana ny fampiharana. Noho ny fifanarahana sy ny olana hafa.
Inona àry no tokony hataon'ny mpampiasa Android amin'ny toe-javatra toy izany, rehefa tsy afaka miditra amin'ny rakitra Apk mivantana izy ireo? Noho izany amin'ity toe-javatra ity, manoro hevitra ireo mpampiasa Android izahay hitsidika ny tranokalanay. Ary misintona maimaim-poana ny kinova farany an'ny OldRoll Apk amin'ny safidy kitihina iray.
Eto izahay dia manolotra maimaim-poana ny dikan-teny azo antoka sy azo ampiasaina amin'ny rakitra Apk. Heverina ho tsotra foana ny dingana ary tsy mila alalana. Na dia talohan'ny fanolorana ny rakitra Apk ao anatin'ny fizarana fampidinana aza dia efa nametraka ny fampiharana tamin'ny fitaovana samihafa izahay ary nahita fa milamina.
Ny tranokalanay dia manankarena amin'ny fampiharana fakan-tsary mitovy. Izay tsara amin'ny fakana sary tsy manam-paharoa sy manintona amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta. Raha te hijery ireo fampiharana hafa ireo dia araho ny rohy misy Gcam Nikita 2.0 Apk ary Avatar APK.
Raha leo ianao amin'ny fampiasana milina teknolojia avo lenta sy farany. Saingy mitady loharanom-baovao manome traikefa antitra manankarena amin'ny safidy. Avy eo, amin'ity lafiny ity, manoro hevitra ireo mpampiasa Android izahay hametraka Old Roll Apk ary mankafy ny fakana sary tsy manam-paharoa maimaim-poana.
Sokajy Photography, Apps Tags Camera App, Android Roll taloha, Old Roll Apk, Old Roll App, Taloha Roll Download Post Fikarohana
GDPS Editor Apk Download Ho an'ny Android [Lalao Editor]